अध्यक्ष केसीले हस्ताक्षर गर्नु भएको सो वक्तव्यमा काङ्ग्रेस समर्थकहरूले विष्टको हत्या गर्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेको तर अन्य साथीहरूको सहयोगका कारण बाँचेको ठहर गरिएको छ । प्रशासन उक्त घटनालाई गम्भीर रूपमा नलिएको दावी गरिएको सो वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “हालै रोल्पामा नेपाली काङ्ग्रेसका गुण्डाहरूले हाम्रो पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष का. मेघनाथ विष्टलाई कुटपिट गरेका छन् र त्यसबाट उहाँको नाक र आँखामा समेत गम्भीर चोट लागेको छ । त्यस प्रकारको कुटपिटको कारणले उहाँले कैयौँ दिनसम्म बुटवलको मेडिटेक अस्पतालमा उपचार समेत गराउनु परेको थियो । उहाँमाथि भएको त्यस प्रकारको कुटपिटको कार्यलाई हाम्रो पार्टीले तीव्र शब्दमा भ्रत्सना गर्दछ ।
वास्तवमा काङ्ग्रेसका गुण्डाहरूले उहाँलाई हत्या गर्ने उद्देश्यले नै आक्रमण गरेका थिए । तर उहाँसँग भएका अन्य साथीहरूको सहयोगका कारणले उहाँ बच्नु भएको थियो । उहाँमाथि भएको कुटपिटको कार्यलाई स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले समेत गम्भीर रूपमा लिएको छैन । हामीले उहाँमाथि भएको कुटपिटका लागि शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कडा सजाय दिनु पर्ने आवश्यकता जोड दिन्छौँ ।”
अध्यक्ष विष्ट आफ्नो घर जाँदै गरेको अवस्थामा २०७५ भाद्र १८ गते सुनिल स्मृति गाउँपालिका–३ सानो लिवाङ रोल्पामा आक्रमणमा पर्नु भएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका उद्दण्ड कार्यकर्ताका रूपमा चिनिने कुलदेव घर्ती (भोलङ घर्ती ) ले सो स्थानमा विष्टमाथि सो दिन साझ एक्कासी बज्रमुक्का प्रहार गरेका थिए । सानो लिवाङ पुलनेर अध्यक्ष विष्टलाई एक्लै पारी झुक्याएर घर्तीले कुटेका थिए । आक्रमणमा परी अध्यक्ष विष्टको आँखा र नाकमा गहिरो चोट लागेको छ । पहिले सुलिचौर प्राथमिक उपचार केन्द्रमा उपचार गराउनु भएका विष्ट त्यहाँ अगाडिको उपचार सम्भव नहुने भएपछि सोही उपचार केन्द्रको सिफारिसमा बुटवलको अस्पताल लाइन स्थित मेडिकेट अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो । त्यहाँ प्रहारबाट फुटेको नाकको अप्रेसन पश्चात् अहिले विष्ट रोल्पा फर्किनु भएको छ ।
अध्यक्ष विष्टमाथि आक्रमण गर्ने घर्तीलाई प्रशासनले सुरुमा गिरफ्तार गरे पनि सामान्य सोधपुछ पश्चात् छाडिदिएको छ । “पहिले उपचार गर्ने र त्यसपछि छलफल गर्ने भन्दै प्रहरीले निज घर्तीलाइ छोडिदिएको छ“ अध्यक्ष विष्टले हाँकलाइ भन्नु भयो– “आक्रमणकारीमाथि कारवाही गर्न प्रशासनले खासै चासो दिएको छैन ।” त्यसरी एक्कासी आक्रमण किन गरियो त ? हाम्रो प्रश्नमा अध्यक्ष विष्टले भन्नु भयो– “ममाथिको यो आक्रमण राजनैतिक कारणबाट नै भएको प्रष्ट छ । पछिल्लो समय सुलिचौर क्षेत्रमा राजमोको प्रभाव बढ्दै गएको छ । भाद्र ५ गते सुलिचौरमा हाम्रो विरोध सभा भएका बेला त्यहाँ स्थानीय रूपमा सक्रियतापूर्वक कृयाशील रहेका ने.का. समर्थक केही कार्यकर्ता राजमोमा प्रवेश गर्नु भएको थियो । राजमोको यस क्षेत्रमा बढ्दो प्रभावबाट अत्तालिएका काङ्ग्रेसहरूले नै ममाथि त्यसरी आक्रमण गराएको हुनु पर्छ ।”